सबैका लागी खुशीको खबर !! वैज्ञानिकले पत्ता लगाए को’रोना न’ष्ट गर्ने सजिलो नयाँ तरिका [ सक्दो शेयर गर्नुहोस ] - Rising Dainik
सबैका लागी खुशीको खबर !! वैज्ञानिकले पत्ता लगाए को’रोना न’ष्ट गर्ने सजिलो नयाँ तरिका [ सक्दो शेयर गर्नुहोस ]
October 24, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on सबैका लागी खुशीको खबर !! वैज्ञानिकले पत्ता लगाए को’रोना न’ष्ट गर्ने सजिलो नयाँ तरिका [ सक्दो शेयर गर्नुहोस ]
अमेरिकाका वैज्ञानिकले मुखमा रहेका को’रोना भा’इरस न’ष्ट पार्ने नयाँ तरिका पत्ता लगाएका छन्। पेनसिलवेनिया विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकले मुख कुल्ला गर्ने ‘ओरल एन्टिसेप्टिक’ र ‘माउथवास’को प्रयोगले पनि को’रोना नि’ष्क्रिय पार्न सकिने दा’बी गरेका हुन्। मुख सफा गर्ने यस्ता औषधिले कुल्ला गर्ने हो भने मुखमा रहेका को’रोना भा’इरसको संख्या कम गर्न सकिने कुरा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट पुष्टि भएको उनीहरूको दा’बी छ।
वैज्ञानिकका अनुसार प्रयोगशालामा ओरल एन्टिसेप्टिक, माउथवास र बेबी स्याम्पु मानिसमा पाइने को’रोना भा’इरसमा हालेर अनुसन्धान गरिएको थियो। त्यस क्रममा केही हदसम्म को’रोना भा’इरस नि’ष्क्रिय भएको पाइएको उनीहरूको भनाइ छ।जर्नल अफ मेडिकल भाइ’रोलजीमा प्रकाशित अनुसन्धानअनुसार बेबी स्याम्पुले २ मिनेटमा ९९.९ प्रतिशतसम्म तथा माउथवासले एक मिनेटसम्म गरगर गर्दा ९९.९९ प्रतिशतसम्म को’रोना निष्क्रिय बनाउन सकिन्छ।
को’रोना सं’क्रमण भएका तथा क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिले नियमित यो प्रयोग गर्ने हो भने निकै प्रभावकारी हुने अनुसन्धानले देखाएको छ। पेनसिलवेनिया विश्वविद्यालयका माइक्रोबायोलजिस्ट क्रेग मेयर्सले भनेका छन्, ‘जबसम्म खोप आउँदैन, तबसम्म को’रोना रोक्न यस्तै नयाँ-नयाँ तरिका खोज्न जरुरी छ।’